Sidee ayuu Apple Watch Series 1 uga duwan yahay Taxanaha 2? | Wararka IPhone
Muxuu Apple Watch Series 1 uga duwan yahay Taxanaha 2?
Apple waxay dhameystirtay shalay soo bandhigida Apple Watch Series 2 waxaana nalooga tagay waji xaalad ah. Xaqiiqdu waxay tahay inkasta oo ay wakhti fiican ku qaateen oo ay noo sheegeen faa'iidooyinkeeda cusub, haddana nooma aysan caddeynin sida ay u kala duwanaan doonaan Apple Watch Series 2 iyo Apple Watch Series 1. Sidaa darteed, Ka dib markaan si taxadar leh u falanqeyno waxyaabaha cusub ee lagu soo bandhigay arrintan, waxaan rabnaa inaan kuu sheegno sida hal nooc uu uga duwan yahay kan kale iyo maxay yihiin qiimaha cusub ee la aasaasay, si aad adigu u go'aansan karto naftaada haddii ay mudan tahay inaad iibsato jiilka cusub ee Apple Watch, ama runtii Apple Watch Series 1 wali waa ikhtiyaar.
Waxaa muhiim ah in la sameeyo isbarbardhigga noocan ah si runtii loo ogaado waxa faa'iidooyinka mid ama nooc kale yahay, gaar ahaan marka labada aaladood ay leeyihiin isku ekaansho aad u daran, xaaladdan farqiga u qaabeynta ayaa ah mid aan jirin, hase yeeshee, aaladuhu waxay ma bixiyaan isla faa'iidooyinka.
1 Muxuu leeyahay Taxanaha Daawashada 2 ee uusan Taxanaha Taxanaha 1 lahayn?
2 Maxay wadaagaan taxanaha taxanaha 1 iyo daawashada taxanaha 2?
Muxuu leeyahay Taxanaha Daawashada 2 ee uusan Taxanaha Taxanaha 1 lahayn?
Marka la soo koobo, Apple Watch Series 2 ayaa si rasmi ah diyaar ugu ah in lagu quusiyo, sidan oo kale, Apple Watch ayaa sidoo kale lagu tilmaami doonaa kormeerka isboortiga ee dadka dabbaasha, taas oo ilaa iyo hadda ay si weyn u niyad jabisay shirkadda Cupertino, oo ka digtay waqtigiisa in taxanaha Apple Watch 1 uu ahaa mid u adkaysanaya buufin, laakiin duruufo jira ma ay damaanad qaadin taas waxay u adkeysan doontaa in lagu quusiyo biyaha ilaa 50 metros. Laakiin halkan kuma joogsanayso, xagga qalabka, Apple Watch Series 2 wuxuu yeelanayaa processor laba-geesood ah oo cusub kaas oo kordhin doona xawaaraha hadda ee aaladda illaa 50%.
Dhinaca kale, shaashaddu waa qiime lagu daray, waxay hadda yeelan doontaa ilaa 1.000 hits oo dhalaal ah, taas oo bixin doonta muuqaal fiiqan xitaa xaaladaha qoraxda ugu sarreeya. Dhinaca kale, codsiga tababarku wuxuu yeelan doonaa laba qaab oo cusub oo kala duwanaan doona sida aan u dabaashano. Cod-baahiyuhu waa sheeko kale, waxaa la dhisay oo leh naqshad casri ah oo mas'uul ka ah ka saaridda biyaha gudaha. Ugu dambeyn, GPS taagan ayaa ah muuqaalka xiddigga iyo kuwa ugu badan ee ay codsadaan ciyaartooyda.
Maxay wadaagaan taxanaha taxanaha 1 iyo daawashada taxanaha 2?
Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waa taas Tixda 1 iyo taxanaha 2 waxay wadaagaan wax kabadan inta aan jeclaan lahayn. Waxaan ku bilaabi doonnaa naqshadeynta, si isku mid ah, ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimaada dhumuc ahaan, cabir ahaan ama culeys ahaanba. Sidaa darteed, dhammaan xargaha waxay la jaan qaadi doonaan labada aaladood iyadoo aan la kala soocin. Xagga awooda, Apple Watch Series 1 sidoo kale wuxuu dhaxli doonaa processor-ka hadda jira ee S2, sidaa darteed awoodu waxay isku mid noqon doontaa labada aaladood, sidaa darteed Apple Watch Series 1 ayaa ka maqnaa dhowr todobaad.
Nolosha batteriga waxaa lagu hayaa labada qalab, Apple waxay sii wadaa inay damaanad qaado madax-bannaanida "hal maalin" oo ku saleysan adeegsiga. Marka laga hadlayo waxqabadka heerka barnaamijka, labada qalabba waxay lahaan doonaan watchOS 3, iyadoon lagu darin wax heer ah sifooyinka aan dib u eegi karno.
Qiimaha Apple Watch Series 1 ayaa si otomaatig ah loo dhimay imaatinka Apple Watch Series 2, si la mid ah, qaar ka mid ah isku dhafka suurtagalka ah ee kuxiran xargaha ayaa baaba'a, yareynta sideed fursadaha iyo isku darka Apple Watch Series 1, labadaba 38mm iyo 42mm. Sidan sida qiimaha hadda yahay:
38mm Sport Gray Aluminium Grey: € 339
42mm Sport Gray Aluminium Grey: € 369
38mm Sport Aluminium Rose Dahab: € 339
42mm Sport Aluminium Rose Dahab: € 369
38mm Sport Aluminium Dahab: € 339
42mm Sport Aluminium Dahab: € 369
38m Sport Aluminium Lacag: € 339
42mm Sport Aluminium Lacag: € 369
38mm aluminium: laga bilaabo € 439
42mm aluminium: laga bilaabo € 469
38mm steel: laga bilaabo € 669
42mm steel: laga bilaabo € 719
Dhoobada: laga bilaabo € 1.469
Waxaan si fudud u dhisi karnaa kala duwanaanshaha, taasna waa in Apple Watch Series 1 uu ku kacayo exactly 100 wax ka yar nooca ugu jaban ee Apple Watch Series 2. Sidaa darteed, Nooca Birta ee ahama ee Apple Watch Series 1 wuu baaba'ayaa, kaliya wuxuu yareynayaa fursadaha aluminium, iibiyaha ugu fiican. Hadda, Ogaanshaha dhammaan faahfaahinta, adiga ayey kugu xiran tahay inaad doorato in Apple Watch uu yahay hadiyadda Kirismaska ​​iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Muxuu Apple Watch Series 1 uga duwan yahay Taxanaha 2?
Waad salaaman tihiin, qalad ayaa ku jira farqiga u dhexeeya 2 saacadood.
Saacadda 1 ee hadda hadhay MA laha processor-ka Watch 2, taxanaha taxanaha 2 ayaa yeelan doona ama leh S2, 1-na waxaa loo cusbooneysiiyay waxa loogu yeero S1P oo horumarin ku noqon doona S1 ee saacadda ugu horreysa , laakiin laba geesood ah (tii ugu horreysay waxay ahayd monotone)
Marka taxanaha saacadda 1 xoogaa wuu ka dhakhso badnaan doonaa kii hore, laakiin taxanaha 2, marka laga reebo gps iyo u adkaysiga biyaha, waxay leeyihiin processor aad uga wanaagsan.
In kasta oo waxa Kaiser tilmaamayaa ay sax yihiin, haddana waxaa sidoo kale halkaa laga sheegay in farqiga u dhexeeya S1P iyo S2 uu yahay GPS-ka. In kasta oo aan u janjeero in aan u maleeyo in ay kala duwan yihiin, waxaa jira doodo macquul ah (Tusaale ahaan, in awoodda wax-soo-saarka ee warshaduhu aysan ku filnaan karin inay bixiso laba nidaam oo kala duwan. Waxay u egtahay mid macquul ah, laakiin taasi waa adduunyo aan sameeyo ma garanayo oo Malaha wuxuu ku celcelinayaa dood doqon ah.)
Xilligan la joogo, dhammaan mala-awaal. Waa inaan sugno jeex jeexan oo wanaagsan si aan runta u ogaanno.
Waxa ugu muhiimsan ee aan arko: Kuwii "hore qaatay" ee aan leenahay Apple Watch "Taxanaha 0" waxay na siiyeen dameer wanaagsan (Cafis luqadda, waan xanaaqsanahay), waxay dib u eegaan saacaddeenna. oo leh processor wanaagsan oo ha sameynin olole ganacsi. Taxanaha 0 si aad ah ayaa loo qiimeyn doonaa, mana awoodi doonno inaan ku iibino qiimo macquul ah maxaa yeelay suuqa gacan labaad ayaa durba hoos u sii dhacaya. Waana tan sida ay nooga mahadcelinayaan taageerada aan siinay saacadda? Ka dib markii aad DHIBAATOOYSatay daawada 1-aad ee naxdinta leh, iyo WatchOS 2 oo leh codsiyo hooyo oo markii ay aakhirkii ordeen, haystay waqti ku filan oo lagu ilaabo wixii aad doonaysay inaad ku samayso arjiga? Dhaqdhaqaaq xumo ay sameysay Apple, waxay afkooda ka buuxinayaan "WatchOS 3 waxaa loogu talagalay ilaaliyaha ugu horeeya maskaxda", laakiin markaa maxay tahay ujeedka helitaanka nooca la hagaajiyay ee Apple Watch kii ugu horeeyay? Miyaynu arki doonnaa WatchOS 4 ee Taxanaha 0? Sidee baan u xanaaqsanahay, Ilaah baan ku dhaartaye.
Ceramic Apple Watch ayaa beddelay Watch Edition
Ma rabtaa inaad kala soo baxdo Super Mario Run isla marka la heli karo? App Store ayaa kugu soo wargelin kara